Apple dia mandefa amin'ny fomba ofisialy ny Apple Pay any Shina | Vaovao IPhone
Voalaza mialoha ny tatitra fa ho tonga any China ny 18 febrily Apple Pay, ary tsy misy zavatra hafa lavitra ny zava-misy, raha vao nanoratra ireo teny ireo aho vao maraina ny andro dia tsapako fa tamin'ny 01:00 ora Espaniôla tamin'ny 18 Febroary ny fahatongavan'i Apple Pay tany Shina dia natao ofisialy. Ny orinasa Cupertino dia efa nanambara fa ny olom-pirenen'ny goavambe Aziatika dia afaka mampiasa ity rafitra fandoavam-bola tsy misy fifandraisana ity Amin'ny alàlan'ny iPhone, mandritra izany fotoana izany any amin'ny faritra sisa amin'ny Eropa dia mbola mila miandry ny famaranana ny adin'ny komisiona masiaka amin'ny banky isika.
Nitranga tao amin'ny tranokalan'ny developer Apple io fanambarana io. Nanambara i Apple tamin'ny taon-dasa fa nifampiraharaha tamin'ny China Union ny fitondrana Apple Pay ho an'ireo mpampiasa any Sina nandritra ny taona 2016, ary maika be izy ireo, iray volana sy tapany taona fotsiny isika izao ary eto . Nandritra izay fotoana izay, Nampanantena koa izy fa ho tonga any Espana i Apple Pay mandritra ny 2016 ary mbola tsy mahalala na inona na inona isika, raha ny fifampiraharahana amin'ny banky frantsay momba ny fipetrahana amin'ny Apple Pay dia manomboka manivana ihany koa ao.
Apple Pay dia efa manohana an'i Shina, manome fomba mora, azo antoka ary tsy miankina amin'ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny carte de crédit sy debit China UnionPay. Apple Pay dia mamela ny mpampiasa hanao fividianana entana sy serivisy ao anatin'ny fampiharana pon nefa tsy mila mampiditra fampahalalana tsy misy dikany.
Ti mCook dia nanokatra ny fitomboan'ny Apple any Shina Izy io dia mandeha amin'ny heriny hatrany amin'ny goavana any Azia, izay amidy ara-bakiteny "toy ny fantsona" ny iPhones. Mandritra izany fotoana izany, any Espana dia mbola tsena faharoa ho an'ny Apple isika, noho izany dia mbola mila miandry mandoa vola miaraka amin'ny iPhone ihany isika na eo aza ny zava-misy fa tamin'ny taona 2014 izy ireo dia nandefa ny fitaovana voalohany mifanaraka amin'ny haitao Apple Pay NFC.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Apple nandefa tamin'ny fomba ofisialy ny Apple Pay any Shina
Apetrakay amin'ny fitsapana ny Xiaomi Mi 20.000mAh, ny bateria ivelany tsara indrindra sy tsy mety ritra ho an'ny fitaovanao